waa haweenay hada ah madaxwaynaha dalka Kuruweshiya
Kolinda Grabar-Kitarović ( hadlay sidii [ɡrǎbar kitǎːroʋitɕ] ( Dhagyso ) , waxay dhalatay 29 April 1968) waa haweenay siyaasi reer Croatia iyo diblomaasi ayaa ah 4-tii iyo hadda Madaxweynaha Croatia tan iyo 2015. Waxay ku haweenaydii ugu horraysay ee loo soo doorto xafiiska tan doorashooyinkii xisbiyada badan ee ugu horreeyay 1990kii iyo xornimadii 1991. Markii ay jirtay 46 sano, waxay sidoo kale noqotay qofkii ugu yaraa ee qabta xilka madaxweynaha.
Madaxweynaha 4-aad ee Croatia
Xafiiska la wareejiyay19 Febraayo 2015
Waxaa sii hormariyey
Ku guuleystey by
Zoran Milanović (La Doortay)
Kaaliyaha Xoghayaha Guud ee NATO ee Diblomaasiyadda Dadweynaha
Xafiiska4ta Luulyo 2011 - 2 Oktoobar 2014
Stefanie Babst (Ku-simaha)
Ted Whiteside (Ku-simaha)
Safiirka Croatia ee Mareykanka
Xafiiska8da Maarso 2008 - 4 Luulyo 2011
Kuxigeenka Skračić (Ku-simaha)
9- Wasiirka Arimaha Dibada iyo Arimaha Yurub
Xafiiska xafiiska17ka Febraayo 2005 - 12 Janaayo 2008
Miomir Žužul (Arrimaha Dibadda)
nafteeda (Arrimaha European)
3- Wasiirka Arimaha Yurub
Xafiiska23 December 2003 - 16 Febraayo 2005
Booska ayaa la joojiyay
29 Abriil 1968 (da'da 51) Rijeka , SR Croatia , SFR Yugoslavia (hadda Croatia )
Ururka Dimuqraadiga ee Kroatikaanka (1993–2015)
Jakov Kitarović ( m. 1996)
Akadeemiyada Dibloomaasiyadda ee Vienna
Jaamacadda George Washington
Kahor doorashadeeda madaxtinimada Croatia, Grabar-Kitarović wuxuu qabtay xilal dowladeed iyo mid diblomaasiyadeed. Waxay ahayd Wasiirka Arimaha Yurub laga soo bilaabo 2003 ilaa 2005, haweeneydii ugu horeysay ee Wasiirka Arimaha Dibada iyo Isdhaxgalka Yurub intii u dhaxeysay 2005 ilaa 2008 labada wasiir ee koowaad iyo labaad ee Ivo Sanader , safiirka Croatian ee Mareykanka sanadihii 2008 ilaa 2011 iyo kuxigeenka xoghayaha guud. Diblomaasiyadeed dadweynaha ee NATO oo hoos timaada Xoghaynta Guud Anders Fogh Rasmussen iyo Jens Stoltenberg laga soo bilaabo 2011 ilaa 2014.
Grabar-Kitarović wuxuu u tartamay doorashadii madaxtinimada ee la qabtey bishii Diseembar 2014 iyo Janaayo 2015 iyada oo ah haweeneyda kaliya ee musharrax ah (afar ka mid ah guud ahaan), oo ku dhameysatay kaalinta labaad ee wareegii koowaad ka dibna u sii gudubtay si tartiib tartiib ah looga adkaaday madaxweynihii xilka hayey Ivo Josipović labaad. wareega. Waxqabadkeedii adkaa ee wareegii koowaad ayaa loo arkaa mid aan la fileynin, maadaama codbixintii ugu badneyd ee madaxweyne Josipović ay siiso hoggaan adag qaarna waxay xitaa muujiyeen inay suurta gal tahay inuu si toos ah ugu guuleysan doono helitaanka in kabadan 50% codka. Wareegii labaad, Grabar-Kitarović wuxuu ka adkaaday Josipović saamiga ugu dhow ee doorashada madaxtooyada illaa iyo hadda (1.48%). Intaas waxaa sii dheer, maadaama dalku horey u lahaa haweeney ra'iisul wasaare ah ,Jadranka Kosor , laga soo bilaabo 2009 ilaa 2011, doorashadii Grabar-Kitarović ee loo doortay madaxweynaha Croatia ayaa sidoo kale lagu soo daray koox yar oo ka mid ah jamhuuriyadihii baarlamaanka oo labadaba lahaa haweeney madaxweynenimo iyo madax dowladeed.
Bishii Agoosto ee 2019 ayay ku dhawaaqday inay doonayso mar labaad iyo ta u dambaysa madaxtinimada doorashada soo socota . Waxay sidaas ku wajahday 10 murashax oo kale wareegii koowaad 22-kii Diseembar 2019, iyada oo kuwa ugu waaweyn ee la tartamaya ay yihiin ra'iisul wasaarihii hore ee Dimuqraadiga Zoran Milanović iyo fannaaniinta muusiga ee muxaafidka ah iyo xubin hore ee baarlamaanka Miroslav Škoro . Ugu dambeyntiina, Zoran Milanović wuxuu helay codadkii ugu badnaa wareegii koowaad (29.55%), sidaas ayuu Grabar-Kitarović ka dhigey madaxweynihii ugu horreeyay ee Croatian ee aan dhammeyn wareegga koowaad ee wareegii koowaad ee doorashada. Intaa waxaa sii dheer, Grabar-Kitarović wuxuu ku guuleystey in uu ka adkaado Škoro marka loo eego xaddiga kaliya ee ah 2.2% ee codadka, sidaa darteedna wuxuu si tartiib tartiib ah ugu dhaqaaqay orodka Milanović. Wareegii labaad, oo la qabtay 5tii Janaayo 2020, Grabar-Kitarović ayaa laga adkaaday dalabkeedii ahaa in la doorto, iyada oo heshay 47.34% codadkii laga dhiibtay 52.66% Milanović. Iyadu waa sidaas ee labaad (isku xigxiga) Madaxweynaha Croatia ee aan ku guuleysan xilli labaad, ka dib Ivo Josipović. Sidoo kale, tirada codadka (507,628) iyo boqolkiiba codadka (26.65%) ee ay heshay wareegii koowaad ayaa weli ah tii ugu hooseysay ee madaxweyne kasta oo Croatian ah illaa maanta. Grabar-Kitarović ayaa lagu wadaa inay ka tagto madaxtinimada 18-ka Febraayo 2020, markaas oo ay xafiiska ku wareejin doonto Zoran Milanović , oo sidaas ku noqon doonta Madaxweynaha 5-aad ee Croatia tan iyo markii ay xornimada qaadatay .
Grabar-Kitarović wuxuu xubin ka ahaa xisbiga dimoqraadiyadda ee Xisbiga Dimuqraadiga ah ee Croatian laga soo bilaabo 1993 illaa 2015 wuxuuna sidoo kale ka mid ahaa seddex xubnood oo Croatian ah oo ka mid ah Golaha Ku- meelgaarka , laakiin waxaa looga baahnaa inay iska casisho labada xilal markii ay xafiiska qabtay. Sanadkii 2015, madaama madaxweynayaasha Croatian aan loo oggolayn inay qabtaan xilal kale oo siyaasadeed ama xubin ka ahaanshaha xisbiga inta ay xafiiska joogaan. Sannadkii 2017, joornaalka Forbes wuxuu ku qoray Grabar-Kitarović inay tahay haweeney 39-aad ee dunida ugu awoodda badan.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolinda_Grabar-Kitarović&oldid=222089"
Last edited on 28 Oktoobar 2021, at 21:59
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Oktoobar 2021, marka ee eheed 21:59.